Nin kashifey sirtii Maraykanka Edward Snowden oo magangalyo weydiistey Ruushka - iftineducation.com
iftineducation.com – Nin u dhashay dalka Maraykanka oo kiciyey buuqii ugu weynaa ee dublamaasiyadeed ee aduunka kaasi oo lagu magacaabo Edward Snowden, islamarkaasina fashiley siraha Maraykanka oo ah in sirdoonka Maraykanka ay dhagaysteen taleefoonada iyo wada sheekeysiga Midoowga Yurub iyo wadamo kale ayaa magangalyo weeydiistey dalka Ruushka.
Saraakiil u hadashay dalka Ruushka ayaa sheegey in ay ka fiirsanayaan magangalyada siyasaadeed ee Snowden uu weeydiistey dalkaasi, xili uu ku suganyahay garoonka dayuuradaha ee Moscow.
Maraykanka ayaanan ogoleyn in magangalyo la siiyo Snowden, islamarkaasina doonaya in loosoo gacangaliyo si loogu qaado dacwado la xiriira qayaano qaran oo uu sameeyey kadib markii uu fakiyey siro muhiim ah.
Snowden ayaa ahaa qandaraasle u shaqaynayay sirdoonka Maraykanka, wuxuuna heley siro muhiim ah kuwaasi oo uu siiyey wargeyska The Guardian ee dalka Britain kasoo baxa, wargeyskuna uu soo daabacay.
Ninkani ayaa doonaya in uu ku noolaado wadamada Latin Amerika oo iyagu u haya beerlaxawsi, islamarkaasina uu taageero ka heysto, balse wali uma suuroobin in uu Ruushka ka tago culeys dhanka Maraykanka kaga yimid dartood.